.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog လုပ်နည်း။ [ How to CreateaBlog ! ]
Blog လုပ်နည်း။ [ How to CreateaBlog ! ]
ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ ဝဘ်ဆိုဒ် လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ခုနောက်ပိုင်း ပိုများလာပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေ ဘလော့ကို
ဝင်လို့လွယ်သွားတာလည်း ပါတယ်။ အရင်က blogspot.com ကို မြန်မာပြည်က ဘမ်းထားလို့ ဝင်ကြည့်တာတောင်
Proxy ကျော်ပြီးမှ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ မကြာခင်ကပဲ ပိတ်သွားတဲ့ Multiply ဆိုဒ်မှာဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့
မြန်မာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ခု အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ ဘလော့မှာ ဆိုဒ်တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ
ကဗျာ စာပေတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာတို့ ဆော့ဝဲလ်တို့ တင်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပျော်သဘော ကလိချင်ရင်ရောပေါ့။
blogspot.com ကလည်း လုပ်တတ်သွားပြီဆို ဘာမဆို အရမ်းကို လွယ်ပါတယ်။ မသိသေးရင်တော့ ခက်တာပေါ့နော်..
နောက်တော့လည်း တစ်ဖြေးဖြေး လေ့လာရင်း စမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ..။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လို
ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးတွေ လုပ်ချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဘလော့လုပ်နည်းကို စလိုက်ရအောင်.........။
ပထမဦးဆုံး www.blogger.com ကိုသွားပြီးတော့ ကိုယ့် Gmail Account နဲ့ Password ထည့်ပြီး Sign In လုပ်ပါ။
ဒါကတော့ Google က Gmail ကို security မြှင့်လိုက်တာပါ။ သင့် Gmail Account ကို တစ်ယောက်ယောက်က
Password သိသွားရင်တောင် ဖွင့်လို့မရတဲ့ 2-Step Verification ကို အသုံးပြုတဲ့လူတွေ များလာပါပြီ။
လိုအပ်ချက် => [ ကိုယ်ပိုင် Hand Phone တစ်လုံး ] ဒီနေရာမှာ အပြည့်အစုံ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်.။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအဆင့်ကို ကျော်လိုက်ပါတယ်..။ အောက်မှာ ဝိုင်းပြထားတဲ့ Skip ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Google+ Profile နဲ့ Blogger Profile ဆိုပြီးတော့ ၂ မျိုးထဲက တစ်ခုကို ရွေးလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့
Blogger Profile ကိုပဲ ရွေးလုပ်ပါတယ်..။ အောက်မှာ ဝိုင်းပြထားတာကို နှိပ်ပါ။
Display Name မှာ သင့်နာမည်ကို ရေးပြီးတော့ Continue to Blogger ဆိုတာကို ဆက်နှိပ်ပါ။
ဒီစာမျက်နှာကို ရောက်လာပြီဆိုရင် New Blog ကို နှိပ်ပေးပါ။
ဒီနေရာကတော့ နောက်ဆုံး အဆင့်ပါပဲ။ Title , Address , Template ဆိုပြီးတော့ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
Title = ခေါင်းစီး စာသားပါ။
Address = ဆိုဒ်လင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုဒ် လိပ်စာပေါ့။ နမူနာ [ http://itwebcrazyboy.blogspot.com ] အဲလိုပါ။
Template = ဝဘ်ဆိုဒ် ဒီဇိုင်း ပေါ့ဂျာ :) ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးလုပ်ပါ။
ဘလော့ကို ခုမှစလုပ်မယ့် သူငယ်ချင်းများ Dynamic Views ဆိုတဲ့ Template ကို မသုံးစေချင်ပါ..။ တစ်ခြား
ရိုးရှင်းသော Template ကိုသာ ပထမဦးဆုံး စတင်သုံးပါ။ နောက် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်သွားမှ ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့
Template များကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်..။ Address ဆိုဒ်လိပ်စာမှာ အောက်ကပုံအတိုင်း
ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ပထမ လုပ်ထားတဲ့လူရှိနေတဲ့အတွက် တစ်ခြား နာမည်တစ်ခု ပြောင်းလုပ်ပါ။
ကျွန်တော် အောက်မှာ လုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်း အားလုံး လုပ်လို့ အဆင်ပြေပြီဆိုရင် Create blog! ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆို ကျွန်တော် Blog လုပ်လိုက်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။ View blog ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ့်ဘလော့ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်စတင်မယ်ဆိုရင်တော့ Start posting ကို နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်..။
ကျွန်တော် ခုလုပ်လိုက်တဲ့ ဘလော့ပါ။ ပို့စ်ကတော့ မတင်ရသေးတဲ့အတွက် မရှိသေးဘူးပေါ့.. No posts.
Start posting ကို နှိပ်ပြီး ပို့စ်တင်မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေ သိထားဖို့ လိုတယ်..။
View blog ကို နှိပ်ပြီးမှ ပို့စ်အသစ်တင်လည်း ရတယ်။ ဘလော့ကို ပြန်ပြင်ချင်တာဆိုလည်း ရတယ်နော်..။
http://www.blogger.com/home ကိုသွားပြီးတော့ အောက်က အတိုင်း လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်...။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ လုပ်ချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေပြီ ထင်ပါတယ်နော်..
Blog လုပ်နည်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ တစ်ချို့လည်း ပြောပြ ပြီးပြီဆိုတော့ ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင်
လိုက်ကလိကြည့်ပေါ့။ အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင် ကွန်မန့်ပေးခဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် itwebcrazyboy@gmail.com ကို
အပ်ပြီးတော့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘလော့နဲ့ ပက်သက်တဲ့ တစ်ခြား လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ နည်းပညာများကိုလည်း
နောက်နေ့တွေမှာ ထပ်ပြီး ရေးတင်ပေးသွားပါမယ်..။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဒီပို့စ်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရေးထားတာပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်လို့၊ အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့
ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ http://itwebcrazboy.blogspot.com ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
Posted by Thurainlin at 06:35